कसरी नि: शुल्क रेलहरु को लागी आवेदन गर्ने
क्रममा निःशुल्क टिकट को एक लागि लागू गर्न, तपाईं आफ्नो आवेदन पेश गर्न आवश्यक युरोपेली युवा पोर्टल जून मा. त्यसपछि न्यायपीठ आवंटित गर्नेछ 15,000 नि: शुल्क रेल टिकट. दोस्रो सेट गर्दा 15,000 टिकट यसलाई अन्ततः हुनेछ योजना गरिएको छ बजेट निर्भर र पहिलो देखि प्रतिक्रिया 15,000 सहभागीहरू. पेश सही मिति जुन 12 र जुन बीच हुनेछ 26. तपाईं हुनेछ यदि तपाईं एक टिकट को लागि लागू गर्न योग्य हुनुहुन्छ 18 जुलाई 1st मा उमेर को वर्ष. 1900 यी निःशुल्क रेल को टिकट ब्रिटिश आवेदकहरुलाई विनियोजन गरिनेछ. त्यसै गरी, फ्रान्स र जर्मनी पनि प्राप्त हुनेछ 1900 टिकट. तुलनामा, आयरिश आवेदकहरु मात्र प्राप्त हुनेछन् 140 टिकट.
यसबाहेक, तपाइँ एक बन्ने इच्छा व्यक्त गर्न आवश्यक छ DiscoverEU राजदूत. यो इच्छा रिपोर्ट समावेश गर्नुपर्छ आफ्नो यात्रा अनुभव र आफ्नो फोटो बनाउने युरोपियन संसद मा DiscoverEU सालगिरह फोटो प्रदर्शनी को लागी उपलब्ध छ.
हामीलाई थाहा छ किनभने तपाईं सबै भन्दा राम्रो मूल्य खोजिरहेको यदि त तपाईं निःशुल्क रेल टिकट प्राप्त भएन, हामी पाउन छिटो खोज इन्जिन प्रदान सस्तो रेल टिकट चाँडै. हामी तपाईंलाई थप यात्रा र भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ कम. क्रेडिट कार्ड सहित धेरै भुक्तानी विकल्पहरू प्रयोग खरिद रेल टिकट, PayPal, र Alipay. चाहे तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ रमणीय दृश्य, राम्रो खाना, रोमान्टिक यात्राको वा युरोप यात्रा गर्न कुनै पनि अन्य कारण, हामी सबै भन्दा राम्रो टिकट प्रदान गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-trains-summer-teens%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#मुक्त #freetrains रेल टिकट रेल सुझावहरू